शनिबार शुभ लाभ पाउन यसरी गर्नुहोस् शनि देवको पूजा !! | सुदुरपश्चिम खबर
शनिबार शुभ लाभ पाउन यसरी गर्नुहोस् शनि देवको पूजा !!
शनिबारको व्रत शनि ग्रहको अनिष्ट फलको परिशमन गर्न, शान्तिकामनका निम्ति तथा जीर्ण रोग, शत्रुभय, आर्थिक संकट एवं मानसिक सन्तापको निवारणका लागि लिइन्छ। धनधान्य वृद्धि एवं व्यापार वृद्धिको उद्देश्यले पनि यो व्रतको पालना गरिन्छ। यो व्रत शूक्ल पक्षको जुनसुकै शनिबारबाट प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।
विकिपेडियामा लेखिए अनुसार अझ श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको पहिलो शनिबारबाट सुरु गरेमा अझ राम्रो हुने विश्वाश छ। फलामबाट निर्मित शनि प्रतिमालाई पञ्चामृतले स्नान गराई धान, अक्षता, फलफूल आदिले पूजा गरी ुॐ शनैश्चराय नमःु यो मन्त्र ३ माला जप्ने गर्नुपर्छ। व्रतको दिन नीलो वस्त्र धारण गर्ने चलन छ।
एउटा भाँडामा शुद्ध पानीमा कालो तिल, ल्वाङ र दूध मिसाई पीपलको बोटमा पूर्व फर्केर उक्त मिश्रित जल चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि भगवान भोलेनाथ महादेवको उपासना गर्नुपर्दछ। यो व्रत जम्मा १९ वटा शनिबारसम्म लिने मान्यता छ। अन्तिम दिन कालो मास, तिल, फलामका सामान आदि काला पदार्थहरू दान गर्नुपर्छ। ब्राह्मण भोजन गराई तथा वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान गरी ब्राह्मणलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ ।
एक पटक सूर्य, चंद्रमा, मंगल,बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू र केतु यी समस्त ग्रहहरूका माझमा एकाआपसमा हामीमध्ये सबैभन्दाको ठूलो भन्ने विषयमा विवाद भयो सबै आआफूलाई ठूलो मान्दथे आपसमा विवाद नसुल्झिएपछि ती ग्रहहरू आआफ्ना तर्क र अडान लिएर देवराज इंद्र भए ठाउँमा गए। इन्द्र भगवानले बुझ्दा जुन राज्यमा शनिदेवको पूजा, आराधना, व्रतोपवास र कथाश्रवण हुन थाल्यो राजा र प्रजा दुबै थरिले अनेक प्रकारका सुखभोग गर्नथाले । यसपछि सनिदेवको महत्व बढेर गएको हो ।
धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । ब्रहमान्डलाई नौ ग्रहहरु को रूप मा वर्णित गरिएको छ । यी नौ ग्रहहरूमा, शनिलाई न्यायाधीश मानिन्छ । शनि सूर्य भगवानको पुत्र हो र मकर कुकुरको मालिक हो। हरेक हप्ता शनिमा तेल दान गर्ने परम्परा रहँदैं आएको छ ।
ज्योतिषका अनुसार, शनिदेवलाई खुशी पारेर तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ उर्जा ल्याउन सक्नुहुन्छ । शनि देवसँग सम्बन्धित केही खास चीजहरूबारे अत्यत्तैं जानकार हुनुपर्दछ । आज हामी यसैं बारेमा कुरा गरिरहेका छौं।
आउँनुहोस् जानौं शनिदेवसँग जोडिएका केही महत्वपुर्ण कुराहरु–ःशनि देवलाई एक महत्त्वपूर्ण देवता भनिएको छ, किनभने शनि देवले हाम्रो कार्यहरूमा फल प्रदान गर्दछ । शनी भगवान सूर्य को पुत्र हो र उसको आमा को छाया छ। यमराज उनका भाइ हुन र यमुना उनकी बहिनी हुन् ।
शनि देवको मानवका लागि शुभकामना छ जसले कडा परिश्रम, अनुशासनमा र धर्म पछ्याउने काम गर्दछ उसको सम्मान गर्नुपर्दछ । शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नुपर्छ।हरेक शनिबार शनिको साथ, पिपलको पनि विशेष पूजा गर्नुपर्छ। पिपल र खुर्सानीमा पानी छर्कनुहोस् । शनीमा तेल चढाउँदा, ध्यान राख्नुहोस् कि तेल वरपरमा पर्दैन। शनिबार कालो तिल दान गर्नुहोस्।
छालाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ। हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्। तेलको सामने तेलको दिपलाई जलाउने गर्नुहोस् । हर शनिबार हनुमान को सामुन्ने सर्सुको तेल को दीप जलाएर हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुपर्दछ । (gnewsnepal.com बाट सभार)
तौल घटाउन चाहानुहुन्छ ? खानुहोस् यी खानेकुराहरु !!
राति उठ्ने र दिउँसो सुत्ने बानी छ ?